October 2016 - Myanmar News Plus
၃ရက်အတွင်း ၆ပေါင်ကျစေနိုင်မယ့် Diet Plan
၃ရက်အတွင်းမှာ ၀ိတ်ချဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥကို အခြေခံတဲ့ Diet Plan လေးကတော့ ၃ရက်အတွင်းမှာ သင့်ကို အကူအညီ ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီ ၃ရက် အတွင်းမှာ အဓိက ရှောင်ရမှာကတော့ ပါစတာ၊ ငံလွန်းတဲ့ အစားအစာ၊ သကြားနဲ့ ချိုလွန်းတဲ့ အစားအစာ၊ Fast Food၊ အဆီများလွန်းတဲ့ အစားအစာ၊ ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ ဥပမာ အာလူးကြော်၊ အကြော်စုံလိုအစားအစာတွေပါ။ Diet Plan မတိုင်ခင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို သေချာ ချိန်ထားပါ။ ၃ရက်ပြီးရင် ထပ်ချိန်ပါ။ ပထမနေ့ မနက်စာ – ကြက်ဥပြုတ် ၂လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၂လုံး နဲ့ Green Tea […]
“အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ သတ္တိရှိဖို့ အဓိက လိုပါတယ်” ဆိုတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ကိုယ်လုံပညာရှင် Michelle နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”
အလှမယ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်သလို ၊ လတ်တလောမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်လုံပညာ (ကိုယ်ခံပညာ)ရပ်တွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ မီရှဲလ် (Michelle) ကို ရိုးရာလေးက သွားရောက်မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်လုံပညာကို သင်ကြားပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေမှာ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ လက်ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လုံခြုံရေးထိခိုက်နေမှု ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် Michelle ရဲ့ အမြင်တွေကို မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Interviewer : ညီမအနေနဲ့ ဒီ ကိုယ်လုံပညာရပ်ကို ဘယ်လို စ လေ့လာခဲ့သလဲ သိပါရစေ။ Michelle : ညီမက ကိုယ်လုံပညာ ဆိုတာထက် မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကို ၂၀၁၁ လောက်ထဲက YMCA မှာ စပြီး ဆရာ တင်ဇော်လတ်နဲ့ […]
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားတွေကို ဆွဲဆောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ ရင်သားဟာ အဓိကနေရာကနေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ တစ်ချို့က အပေါ်ယံကြည့်ပြီး ရင်သားသေးရင် သားကောင်း မိခင် မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးလည်း အယူလွဲတွေရှိကြပါတယ်။ ရင်သားဟာ စွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း ရင်သားကြီး တာကမှ စွဲဆောင်မှုရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သူ့အလှအပနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ ရင်သားကြီးမှ မိန်းကလေး တစ်ယောက် စွဲဆောင်မှုရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောင်္ကျားကောင်းတွေက ဘယ်တော့မှ ရင်သားကြည့် ပြီး မိန်းမမယူပါဘူး။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့ရင်သားသေးနေရင်လည်း အားမငယ်ပါနဲ့။ေ အာက်မှာတော့ ရင်သားသေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အားသာချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. ဘရာမ၀တ်ပဲလည်း နေနိုင်ခြင်း။ သိပ်သိသာလွန်းမှာဆိုးရင်တော့ sport bra လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာမျိုး ၀တ်ထားလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ သို့မဟုတ် လည်ပင်းလောက်အထိ အင်္ကျီခပ်ပွပွလိုဟာမျိုး ၀တ်ထားရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်။ 2. […]
1. အမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားခြင်းကြောင့် ပြည်တည်နာဖြစ်နိုင်ပါတယ် အမွှေးအမျှင်များကိုဖယ်ရှားလိုက်သောကြောင့် ဆံပင်အမြစ်များမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ပြည်တည်နာများဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးဝါးတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူကုသလို့ရနိုင်ပေမယ့်လည်း တခါတရံမှာတော့ ပြည်တွေကိုစုတ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ 2. အမွှေးရိတ်ခြင်းသည် Waxing (ဖယောင်း)နည်းဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်းထက် ပိုမဆိုးပါ Waxing နည်းဖြင့် အမွှေးအမျှင်ဖယ်ရှားခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်ဟုအထင်ရှိကြသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင်တော့ Waxing ဖြင့်လည်း ဆီးစပ်မွှေးများကို ကုန်စင်အောင်မဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ မည်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ အမွှေးအမျှင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အကျိုးရလဒ်ကတော့ ထူးမခြားပေ။ 3. အမွှေးအမျှင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းကို မြင့်တက်စေပါတယ် 2012 ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ အမွှေးအမျှင်ဖယ်ရှားခြင်းဟာ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ပျက်စီးစေခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင့် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဆီးစပ်မွှေးတွေရှိတာကြောင့် အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူပေးပြီး အမွှေးအမျှင်တွေအောက်က ဖုံးအုပ်ထားတဲ့နေရာကိုမရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အမွှေးအမျှင်တွေမရှိတော့ပါက အရေပြားအတွင်းသို့ ရောဂါပိုးများ […]
အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်သွားချိန်မှာ မပူသင့်ဘဲ ပူနေမိတဲ့ အရာ (၅) ခု
ဒီအရွယ်မှာ အားလုံးအခြေကျသင့်ပြီလို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ အသက် ၃၀ နားနီးချိန်မှာ လူငယ်တွေဟာ အချိန် သိပ်မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပြီး သူတို့ မလုပ်ရသေးတာတွေ၊ ဖြစ်မလာသေးတာတွေအတွက် တွေးပြီး ပူပင်တတ်ကြပါတယ်။ တချို့အရာတွေဟာ အသက်အရွယ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်မကဘဲ အခြေအနေ အချိန်အခါနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် မပူပင်သင့်ဘဲ ပူပင်နေရင် စိတ်ညစ်ရတာကလွဲလို့ ဘာမှ ပိုကောင်းမလာပါဘူး။ ၁။ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျ မဖြစ်သေးဘူး နာမည်ကျော် Harry Potter ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်ဆောင် အယ်လ်င်ရစ်ခ်မန်းဟာ အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ်အထိ ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ့်အတွက် အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ သေချာရင် ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ၂။ ပိုက်ဆံမစုရသေးဘူး လူတစ်ယောက်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာက အရမ်းကို စရိတ်စကကြီးပါတယ်။ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်အထိ ငွေမစုနိုင်သေးတဲ့အပြင် လစာထုတ်ရက်နားနီးတိုင်း […]
ဪ ယောက်ျား …
“အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်သူတွေဖြစ်ကြတယ်” – အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ယောက်ျားပီသတဲ့ အမျိုးသားမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ – အသက် ၂၅ နှစ်မှာ အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသားမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ – အသက် ၃၀ မှာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အမျိုးသားမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ – အသက် ၄၀ မှာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အမျိုးသားမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ “အမျိုးသားတွေကတော့ စိတ်အပြောင်းမလဲ မရှိဘဲ ရိုးရှင်းကြတယ်” – အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမောတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ – အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ငယ်ရွယ်ပြီး ချောမောတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို လိုချင်ကြတယ်။ – အသက် ၃၀ မှာ […]
အမျိုးသားများ အသက်ကြီးလာပေမဲ့ ရုပ်ရည် ကြည့်ကောင်းလာမယ့် နည်း (၄) နည်း
တမင်တကာ ပြင်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုးကို မရွေးပါနဲ့။ ၁ – သဘာဝဆံပင် သဘာဝဆံပင်အရောင်ကို လက်ခံလိုက်ပါ။ အဖြူရောင်သန်းလာတဲ့ သင့်ဆံပင်တွေကိုပဲ ဆံသပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပုံကောင်းအောင် ညှပ်ပါ။ ၂ – ဆံပင်ပုံစံ တမင်တကာ ပြင်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုးကို မရွေးပါနဲ့။ ဖရိုဖရဲ ပုံစံမျိုးက သင့်ကို ပိုနုစေပါတယ်။ ၃ – အရေပြား မျက်နှာအရေပြားကိုတော့ စောစီးစွာကတည်းက ဂရုစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေပူထဲသွားရင် ဦးထုပ်ဆောင်းတာ၊ မျက်နှာကို သန့်ရှင်းအောင် ထားတာမျိုးတွေဟာ အသက်အရွယ်အစောပိုင်းကတည်းက ဂရုစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄ – ရင်ဘတ်မွေး ရင်ဘတ်မွေးရှိရင် ရိတ်ပါ။ Photos & Source: Men Health Duwun
အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချစ်မရှိလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အချို့တွေကတော့ ဇနီးသည်နဲ့ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေဖို့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားနေရင်းကပဲ ဇနီးအပေါ် ဂရုမစိုက်မိသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးသည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိရုံမက ချစ်လည်းချစ်တတ်ကြောင်း ပြသဖို့အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ပါတီသေးသေး သူရောကိုယ်ပါ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုခေါ်ပြီး အိမ်မှာပဲ စားပွဲသောက်ပွဲ သေးသေးလေးတစ်ခုလောက် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူမမှာလည်း ပင်ပန်းနေရတာတွေရှိတတ်လို့ စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေ လျော့သွားတာပေါ့။ ၂။ ညစာထွက်စား ဆိုင်ကြီးကြီးဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဆိုင်သန့်သန့်လေးမှာ နှစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး ညစာထွက်စားဖို့ သူမကိုခေါ်ပါ။ ၃။ ဖုန်းထားခဲ့ ညစာအတူစားနေတုန်းမှာ ဖုန်းကိုမကြည့်ပါနဲ့။ အချိန် နာရီဝက်လောက်လေးအတွင်းမှာ ဖုန်းကို silent လုပ်ထားပြီး စကားတွေပြောပေးမယ်ဆို သူမ အရမ်းကြည်နူးသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်မိန်းမထက် […]
အိပ်ရာ ဝင်တဲ့အခါ ဆံပင်ပျက်စီးစေတဲ့ အလေ့အကျင့် (၄) ခု
ဆံပင်တွေ မခြောက်ဘဲ အိပ်တာကြောင့် ဆံပင်ကျိုးကြေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်​။ ၁ – ဆံပင်စည်း ဆံပင်စည်းပြီးအိပ်တာဟာ ဆံပင်ကျိုးကြေတာတွေ၊ ကျွတ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းကျပ်ပြီး ဘယ်ညာလူးလှိမ့်တဲ့အခါ ဆံပင်ကို အမြစ်က ဆွဲနုတ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ၂ – ရေစို ဆံပင်တွေဟာ စိုနေတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေ မခြောက်ဘဲ အိပ်တာကြောင့် ဆံပင်ကျိုးကြေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၃ – ခေါင်းအုံး အကောင်းဆုံးကတော့ ပိုးသားခေါင်းအုံးဖြစ်ပါတယ်။ ချည်သားခေါင်းအုံးဟာ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ဆံပင်ရှိသူတွေ၊ ဆံသား မခိုင်သူတွေအတွက် ဆံပင်ကျိုးကြေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၄ – ခေါင်းဖြီးတာ အိပ်ရာမဝင်ခင် ခေါင်းဖြီးတာဟာ ဆံပင်တွေကို ဖိအားပေးသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြီးမယ်ဆိုရင် ဘီးအကျဲကိုသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ Photos & […]
ညက ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ မိုးကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ရာသီဥတုက အေးတမြမြရှိလေသည်။ သာသောင့်သာယာ နံနက်ခင်းပေမို့ လောကဓာတ်ကြီး တစ်ခုလုံးလည်း သစ်လို့နေသည်။ သစ်ပင်ပန်းမန်တို့သည်လည်း စိမ်းစိမ်းစိုစို လန်းလန်းဆန်းဆန်း ရှိနေပေ၏။ ရန်ကင်းတောင်ခြေ လမ်းမှာလည်း မှိုင်းမှိုင်းပျပျလေး စွတ်စို၍နေပါသည်။ ထိုရန်ကင်းတောင်ခြေရှိ ကျူရိုး၊ ဓနိဖြာ၊ ၀ါးထရံကာနှင့် ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ထားသည့် ခြေတံရှည်အိမ်ကလေး၏ အရှေ့ဘက်တွင် အဘိုးအိုတစ်ဦး အပေါ်ပိုင်း အင်္ကျီမပါ ဗလာကျင်းဖြင့် ၀ါး၊ ဓနိတွေဖြင့် ပရိယေသန၀မ်းစာအတွက် ၀ါးထရံတွေ ရက်လုပ်နေသည်။ ထိုဝါးထရံအိမ်ကလေး၏ အနောက်ဘက်ရှိ မီးဖိုချောင်လေးမှာတော့ အဘွားအိုတစ်ဦး ထမင်းဖြူနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် ဆုပ်နယ်ကာ ပန်းကန်းပြားလေးထဲထည့်ပြီး အိမ်ရှေ့မန်ကျည်းပင်ပေါ် ခိုနားနေသည့် ချိုးငှက်ကလေးအား မိချိုးရေ ထမင်းစားရအောင် လာခဲ့ဟု လှမ်းခေါ်၍နေလေ၏။ ခေါ်သံကြား၍ ဆင်းလာသော မိချိုးလေးအား ထမင်းစားပြီး ရေသောက်ရန် […]